🥇 ▷ Falanqaynta Mini Motorways: taxanaha ruuxiga ah ee loo yaqaan 'Mini Metro' waa mid ka mid ah ciyaaraha qabatinka badan ee Apple Arcadian. ✅
Falanqaynta Mini Motorways: taxanaha ruuxiga ah ee loo yaqaan ‘Mini Metro’ waa mid ka mid ah ciyaaraha qabatinka badan ee Apple Arcadian.
In kasta oo cilmiga degdegga ah iyo cilmiga farsamada ee ka danbeeya abuurista magaalo, ay jiraan wax sixir ah oo ku saabsan aragtida dhammaan malabkan laga sameeyay dhismayaasha ay ku yaalliin magaalada weyn ee indhaha shimbiraha. Dareen amar iyo xakameyn oo aan aad ugu farxo. Laakiin si kastaba ha ahaatee, Wadooyinka yaryar Aad bay uga fogtahay u soo dhowaanshaha muuqaalkaas muuqaalka ah ee sameeyayaasha sida SimCity ay sameeyaan ama, wax u dhowaan u socda, Magaalooyin: Skylines.
Naqshadeynta iyo shaqada farshaxanka ee Naadiga Dinosaur Polo Club, sidoo kale abuurayaasha Mini Metro, waxay ku qasban yihiin inay yareeyaan fowdadaas ku habsatay muujinta ugu yar. Si aad u aragto sida ugu hufan ee muwaadiniinta looga soo qaado halkan loona qaado wax u fudud sida dhismayaasha iyo gawaarida oo la isku sawiray wadooyinka fudud
Maxay Ciyaaruhu ugu fudud yihiin sida caadiga ah kuwa ugu xiisaha badan
Soo bandhigi si lama filaan ah Apple Arcade, iyo iyada oo aan xog laheyn taariikhda saxda ah ee uu ku yimid PC-ama suurtagalnimada in lagu arko on Android ama consoles-, ayaa ahayd mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan la yaabay sida aan ugu mahadnaqay adeegga macaamiisha cusub. Cinwaankeedii hore, wuxuu diirada saaray abuurida shabakadaha dhulka hoostiisa oo leh isku mid ah isla markaana dhadhan fiican u leh minimalism, waa mid ka mid ah kuwa yaryar laakiin si weyn u qanciya oo aan aado marka aan wax kale gacanta ku jirin.
In kasta oo waalli ka soo dhacaya uu dhacayo dhawr miridh ka dib isla isla ciyaartaas, waxaan hurdada ka toosiyaa si aan u arko baabuurkeeda midabka leh oo halkan uga sii gudbaya halkaasna rakaabkii ku sii jeeday hoos loogu dhigay qaababka joomatikada. Shaqada reer Niyuusiilaan waxay iila muuqataa inay tahay mid ka mid ah guulaha waaweyn ee waaweyn, iyadoon la soo bandhigin ama suuq geyn saddex geesood ah A, waxay ka dhigeysaa warshadaha fiidiyowga horumaro adoo si xarago leh uga dhex hadlaya waxa shaki la’aan ah fikradaha waaweyn.
Wadooyinka yaryar, taas oo wax ka beddeleysa saldhigyada tareenka ee loogu talagalay guryaha iyo xafiisyada, iyo jidadka loogu talagalay jidadka iyo jidadka waaweyn, kuma raaxaystaan ​​yaabkaas la yaabka leh ee ay soo bandhigeen ciyaartii ugu horreysay. Xaqiiqdii waxay mas’uul ka tahay kaliya bixinta qaanso wanaagsan oo rinjiga qaaciddada isla markaana loo beddelo hal hab oo gaadiid loogu beddelo mid kale.
Waa kuwee Mini Min lagu qasbay in saddex geesood la geeyo xarun leh saddex xagal la calaamadeeyay, oo ku jiidaya xariiq midab leh aag meel kale, halkan waxaa ku jira dhaqaajinta ku saleysan midabbo si gawaarida guriga casaanka ay ugu dhammaadaan xafiiska oo lagu sawiray isku cod. Inta lagu gudajiro guryaha cusub iyo midabyo cusub oo ku qasbi doona sii wadida abuuritaanka waddooyin fuliya hadafkooda.
Maroojin isku mid ah
Xawaare aad u dheereeya oo aan garaacis lahayn laakiin aan joogsi lahayn, gaabis ah iyo xitaa caajis ah inta lagu jiro tallaabooyinka ugu horeeya laakiin daallan marka magaaladaadu ku darto tobaneeyo gaadiid ah oo halkan uga sii tallaabaya, saacad ayaa astaan ​​u noqon doonta soo afjarida maalmaha inta aan sugeyno imaatinka Axad.
Waxay noqon doontaa daqiiqada ay ciyaartu na siinayso 20 qaybood oo cusub oo wadooyin ah iyo doorashada hadiyad dheeraad ah. Buundo kuu oggolaaneysa inaad ka gudubto wabiyada, nalka taraafikada ee xaddidaya taraafikada iyo ciriiriga taraafikada ee isgoysyada mashquulka ah ama, taaj dahabka ah, waddo weyn oo horseedda hal dhibic ilaa heer kale iyadoon loo eegeyn wadooyinka ama dhismayaasha wadada ku weheliya.
Marka laga reebo tan dambe, oo ku habboon marka ay dhammaan guryaha caddaanka ahi ku urursadaan koonaha in kasta oo ay yihiin xafiis u dhigma dhinaca kale ee magaalada, inta soo hartay ayaa ah kuwo si aan caadi ahayn u muuqata. In ka badan, adoo adeegsanaya isbarbar dhiga muuqda, isugeynta la bixiyay Mini Min in lagu daro wadiiqooyinka ama khadadka cusub.
Maxay ahayd ciyaarta 2014 waxay ahayd hadiyad aad ku heshay gacmo furan iyadoon loo eegayn waxa ay tahay, halkan waxaa ah hannaan kaliya oo sugaya wadadaas cusub ee ugu dambeynti kuu oggolaaneysa inaad yareysid gaadiid yar oo dhexaadka ah. Waa sidaas, si la yidhaaho, fikrad yar oo dhiirigelin leh Qaaciddada oo waxyaabo dhawr ah wejiga lagu ridi karo.
In kasta oo ay umuuqato ciyaar ka hooseysa wixii la filaayey in ay ku soo bilowdo markii ugu horaysay, hadana waa in aan idhahaa waa ta kaliya ee kadhigtay bilowga ilaa dhamaadka buugga ee Apple Arcadian. Qeyb ka mid ah eedda ayaa leh muddadiisa, waa tiro kooban oo magaalooyin ah oo bixiya galab, mana jiraan qaabab loo qabto marka laga reebo fikradda ah in kor loo qaado boosaska dhibcaha. Si kastaba ha noqotee, inaad haysato boqol magaalo oo la heli karo, ayay u badan tahay waan sii waday ciyaari lahaa halkii qoraalkan loo qori lahaa.
Maaddaama Mini Metro horey u jirtay, Wadooyinka yaryar waa nuug badan oo qaali ah heer aan sida caadiga ah looga arag adduunka fiidiyoowga. Wax kayar waaxda qaybta mobilada. Isagu waa dhaxal jecel xiisaha xumadan ee ciyaaraha tooska ah ee muujiyey wax badan oo aad u yar, isaga oo ku siinaya khibrado cusub oo xiiso leh ka hor horumarka aadka u adag ee qaybta.
Waa, muddo gaaban, waa sabab kale oo lagu doonayo in lagu maaweeliyo goobta madax-bannaan oo la isku dhiibo, xitaa suuqa sida muranka u yahay moobiillada, waa yaabeyaashaas yar yar ee muujinaya sida aan uga fogeynno fikradaha. Mini Metro waxaa laga yaabaa in lagu sii rakibo mobaylkayga, laakiin waxaan aaminsanahay in nuuradda ay u egtahay nooc cusub oo ka imanaya Dinosaur Polo Club Wadooyinka yaryar Mustaqbal la mid ah.
Kumbuyuutar Ha yeelin
Soo saare Naadiga Dinosaur Polo Club
Shirkadda Naadiga Dinosaur Polo Club
Furitanka Hada waa la heli karaa
Qiimo Waxaa lagu heli karaa Apple Arcade (4.99 yuuro bishii)
Waa shaqo yar oo qaali ah
Caanobooraha sida ugu fudud ee walaxda
Waxay u shaqeysaa sidii tartan soo noqnoqonaya haddii aan isku dayo inaan hagaajino dhibcahayaga
Wax ka yar dhiirrigelinta Mini Metro
Habab yar iyo magaalooyin